Sida loo dar SRT in MP4 (Windows 8 ka mid ah)
> Resource > Beddelaan > Sida loo dar SRT in MP4 (Windows 10 ka mid ah)
File SRT waa file Cinwaan qoraalka ku salaysan. Waxay isku daraa track video si ay u caawiyaan dadka isticmaala fahmi video ama filim wanaagsan. Haddii aad soo bixi file MP4 ka Internet la'aan Cinwaan, video ama filim uu noqon karaa mid aad u adag in la fahmo, gaar ahaan marka ay tahay luuqad ajnebi ah. Maqaalkani waxa uu ku talin doonaa 2 codsiyada si ay kaaga caawiso si aad u hesho Cinwaan SRT in videos MP4.
# 1 Video Converter Ultimate (midowdo SRT la MP4)
# 2 Wondershare Player (Ku dar ART in MP4)
# 1 Video Converter Ultimate: midowdo SRT & MP4 aan Deji
Midowdo ama hardcode Cinwaan SRT leh iyo in videos in qaab kasta.
Qabtaan sida barnaamij video tafatirka xirfad kobcinta aad videos la saamaynta kala duwan.
All-in-hal xidhmo, ka shaqeeya sidii Converter video ah, DVD gubi iyo video downloader.
Ku dar video metatadata si wanaagsan loo abaabulo maktabadda Lugood aad.
Midowdo SRT la MP4
Waxaad isku wadi kartaa SRT la MP4 xawaare ka sarreeya ka ciyaaro ciyaaryahanka DVD la flash drive ama isticmaalka USB, iwm ayaa file MP4 mideeyey waa in tayo sare leh, AAN tayada khasaaro.
Ku kab Videos la Raadka
hor inta hardcoding Cinwaan SRT in MP4, aad dajiyaan karaa file ka galay Converter SRT this, ka dibna ciyaari talantigaagii si ay u shakhsiyeeyo by qoqobada, falinjeeerka, lana siii oo ku daray watermark, iwm
Dar metadata in MP4
doonaysaa in aad soo bixi videos sida kuwa soo iibsatay ka Lugood? Kaliya Waxaad isku dayi kartaa in aad ku darto arjigan metadata in MP4 for videos loo maqli fiican aaladaha Apple.
Advanced All-in-Mid ka mid ah Qalabka
Waxaa kara in aan loo isticmaalin oo kaliya in ay ku milmaan SRT in MP4, laakiin sidoo kale kaa caawin kara si loogu badalo videos in qaab kasta, gubi DVD badan oo arrimo menu funny ee mawduucyada kala duwan, oo kala soo bixi YouTube videos.
Guide: Sida loo midowdo SRT & MP4
Ka hor galinta SRT in MP4, waa in aad haysataa files MP4 aan subtitles, aad SRT doonayo files Cinwaan iyo download iyo rakibi Windows ama Mac version of SRT in ay ku biirto MP4. Marka aad wax walba u diyaariyeen, kaliya raac tilmaan-hoose si aad u midowdo SRT la MP4 talaabo talaabo ah. Ogsoonow in buugan waxaa inta badan loogu talagalay ee isticmaala Windows, laakiin sidoo kale waa ku haboon users Mac, geedi socodka hawlgalka labada qeybood oo waa la mid caadi ahayn.
1. Orod this app iyo soo dejinta files MP4
Ka dib marka aad abuurtaan app this, kaliya u tag "Beddelaan"> "Add Files" doorasho xitaa your computer inay dajiyaan files MP4 aad rabto in aad ka. Haddii aad u furo gal meesha faylasha aad ku kaydsan yihiin, toos uun jiidi files bartilmaameedka laga galka barnaamijka.
2. Hardcode SRT in MP4
Hit ah "Edit" button ka mid ah video item bar. Marka aad gashid interface tafatir ah, waxaad ogaan doontaa inay jiraan afar tabs dhanka bidix. Just ku dhufatey "Cinwaan" tab, riix "+" button in la furo liiska hoos-hoos ka, ka dibna caleenta iyo files SRT load ka your computer. Halkan, waxaad sidoo kale u samayn karaa goobaha kale ee sida baaxadda, midabka iwm Markii wax walba la sameeyo, kaliya ku dhacay "OK" si ay u xaqiijin.
Fiiro gaar ah: Ka hor inta dhoofinta faylasha aad, aad si fiican u lahaa inaan ku eegaan saamaynta uu furmo suuqa arkaysid dhinaca midig ee ay interface ugu weyn. Just ka dhacay item video in ay leeg- ah ka dibna riix "Play" button hoos suuqa kala Xiisaha Leh.
3. Ku bilow inaad ku darto Cinwaan SRT in MP4
Marka aad ku qanacsanayn saameynta, aad dhoofin karo file cusub. Marka hore, hubi in "Qaabka" icon u muuqataa "MP4" format, ama aad leedahay si aad riix "Qaabka" icon dhinaca midig in ay doortaan MP4 liiska qaabka sida qaabab wax soo saarka ay. Dabcan, aad rabto in aad badbaadin files ah qaabab kale, kaliya dooro qaabka aad rabto in aad halkan. Ka dib markii in, wax miiran "Beddelaan" badhanka si loogu badalo SRT subtitles in MP4 videos. Marka ay ka badan, aad file cusub MP4 la Cinwaan SRT galka wax soo saarka ka heli kartaa.
Video Tutorial: Sida loo dar SRT in MP4 la Video Converter Ultimate
# 2 Wondershare Player : Ku dar SRT in MP4 la
Video Converter Ultimate Gelineya inaad isu geeyo srt iyo mp4 galay mid ka mid file . Haddii aad rabto in aad ku darto srt markii arkaysid files mp4, warbaahinta kale oo lacag la'aan ah player- Wondershare Player - ayaa kaa caawin kara inaad gaarto this. Waxa ay taageertaa qaabab Cinwaan kala duwan sida srt, SSA iyo dameerradiiba, laakiin waxaad u baahan tahay dhibaato soo degida Cinwaan in ciyaaryahanka mar kasta oo marka aad daawato aad videos. Xaaladdan oo kale, Video Converter Ultimate noqon doonaa doorasho fiican.
Guide: Sida loo Bilaash dar SRT in MP4
1. Run Wondershare Player oo fur Your MP4 File
Ka dib markii ay soo degsado iyo ku rakibidda Wondershare Player, guji "Open Files" in interface ugu weyn in la furo file mp4 aad.
2. Ku dar iyo Edit Your File Cinwaan
Marka file MP4 aad la ciyaaray, xaq guji shaashadda oo dooro subtitles> subtitles Load ku darto faylka Cinwaan. Hadii faylka wax Cinwaan u baahan tafatirka, dooran subtitles Settings si ay ula qabsadaan Jabhadda Size,, Jagada, Color oo dheeraad ah oo aad jeceshahay.
Beddelaan VOB in MP4 : Tus sida loo badalo vob in mp4 losslessly aad, si aad u ciyaari karo files aad jeceshahay la kombuyuutarrada gacanta on go ah.
Beddelaan MOV in MP4 : Baro sida loo badalo MOV in MP4 ee Mac / Win la MOV Adduunka ee ugu dhaqsiyaha badan si Converter MP4.
Wareeji MP4 Files : Eeg sida loo shaandheyn files MP4 90 darajo oo la rotator ah MP4 weyn si fiican u ciyaaro ciyaaryahan warbaahinta.
Play MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360 : Hadii aad dhibaato ku ciyaaro MP4 on Madaxweyne Siilaanyo Oo 360, waxaad ka heli kartaa sababta oo halkan xal loo helo.
Beddelaan MP4 in ISO : Beddelaan MP4 in image ISO files dambe gubanaya dibna ciyaaro ciyaaryahan DVD joogto ah.